Ɔkwan a Yɛbɛfa so Asua Ade Ansa na Yɛakɔ Yehowa Adansefo Nhyiam
Sɛ wo ne Yehowa Dansefo bi sua Bible a, ɛda adi sɛ bere nyinaa wobɔ mmɔden di kan sua ade a mubesusuw ho no. Saa ara na ɛyɛ papa sɛ wubedi kan asua ade a wobesusuw ho wɔ asafo nhyiam ase no na ama woanya so mfaso kɛse. Sɛ yɛyɛ nhyehyɛe pa de sua ade daa a, yenya so mfaso pii.
Hu bere ne baabi a wubesua ade. Bere bɛn na wubetumi de w’adwene asi ade a woresua no so yiye? So ɛyɛ anɔpatutuutu a wunnya mfii adwuma ase, anaa anadwo a mmofra no adeda? Sɛ wuntumi nsua ade bere tenten mpo a, wubetumi de bere pɔtee bi asi w’ani so, na woabɔ mmɔden sɛ woremma biribiara ntwitware w’akwan mu. Hwehwɛ baabi a ɛhɔ yɛ komm; dum radio, television, telefon, anaa yi biribiara a ɛbɛtwetwe w’adwene fi hɔ. Sɛ wobɔ mpae ansa na woasua ade a, ɛbɛboa wo ma woayi w’adwene afi ɛda no mu adwinnwen so, na ama woatumi de w’adwene asi Onyankopɔn Asɛm no so.—Filipifo 4:6, 7.
Twitwa nsɛm no bi ase, na yɛ w’adwene sɛ wobɛma mmuae. Di kan hu nea asɛm a wobesusuw ho no fa ho. Susuw adesua no asɛmti ho, hwɛ sɛnea nsɛmti nketewa no mu biara fa asɛmti no ankasa ho, na hwɛ mfonini no mu biara, na afei susuw nsɛmmisa a wɔde yɛ ntĩmu a ɛtwe adwene si nsɛntitiriw so no ho. Ɛno akyi no, kenkan nkyekyɛm no mu biara, na hwehwɛ ɛho asɛmmisa no ho mmuae. Kenkan kyerɛw nsɛm a emu nsɛm nni adesua no mu no, na susuw sɛnea emu biara fa asɛm no ho ho. (Asomafo Nnwuma 17:11) Sɛ wuhu asɛmmisa no ho mmuae a, twitwa nsɛntitiriw kakra a ɛbɛma woakae asɛmmisa no ho mmuae no ase. Afei sɛ wokɔ asafo nhyiam na sɛ wopɛ sɛ woma mmuae a, wubetumi ama wo nsa so na wode w’ankasa wo nsɛm ama mmuae tiawa.
Sɛ wudi kan susuw nneɛma a wobesua wɔ asafo nhyiam ahorow ase dapɛn biara ho a, wubenya nimdeɛ foforo aka ‘w’akorade dan’ a ɛne Bible mu nimdeɛ a wowɔ no ho.—Mateo 13:51, 52.
Nhyehyɛe bɛn na wubetumi ayɛ de adi kan asua nea yebesusuw ho wɔ asafo nhyiam ahorow ase no ho?
Wobɛyɛ dɛn atumi asua ade na ama woama mmuae wɔ asafo nhyiam ase?
Di akwankyerɛ a wɔde ama wɔ atifi hɔ no so fa sua Ɔwɛn-Aban Adesua anaa Asafo Bible Adesua. Ma nea ɔne wo sua Bible no mmoa wo na siesie mmuae a wobɛma wɔ asafo nhyiam a edi hɔ no ase.
Ɔkwan Pa Bɛn na Yebetumi Afa so Asua Ade Ansa na Yɛakɔ Kristofo Nhyiam?